အင်းစက် – alanlaymyar
Posted on November 3, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
“သမီးကြည့်ချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်လှန်ကြည့်လေ.” ပြောတာနဲ့ လွတ်နေတဲ လက်တဖတ်နဲ့ ဦးဦးရဲ့ ပုဆိုးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ခါးထိအောင် မတင်လိုက်မိပါတယ်…. သမီးဘ၀မှာ ပထမဆုံး မြင်ရတဲ့ လီးကြီးဟာ. အချောင်းကြီးက မဲနက်နေပြီး ထိပ်ဖူးကြီးက ပွင့်အာကားထွက်နေကာ နီးညှိရောင်သန်းလို့နေပါတယ်… လမွှေးများက မဲနေပြီး ကွေးကောက်ခါ အချင်းချင်း လိမ်ယှက်နေကြပါတယ်.. သမီးလဲ ငယ့်ငယ့် စာအုပ်ထဲက လီးပုံစံ တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည်မိတယ်လေ… အသက်ဝင်ပြီ တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ ဦးဦးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ စါအုပ်ထဲက လီးကြီး.. တခြားစီပါဘဲ… ဦးဦးက သူ့လက်ကြီးနဲ့ သမီးလက်ကလေးကို ကိုင်ကာ သူ့လီးကြီးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်နည်းသင်ပေးပါတယ်.. သမီးလဲ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ဦးဦးရဲ့ လီးကြီးကို ဒစ်ပေါ်သွားအောင် ဆွဲချလိုက်. ထိပ်ဖူးကြီးမှာ အရည်ခွံတွေ စုပုံသွားအောင် ဆွဲတင်လိုက်.. […]
Posted on October 31, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
အင်းစက်ပါ ဖက်ရဲမှဖက်ပါ ဒါနဲ့အင်းစက်ဆိုတာသွေးသားခြင်းဆက်ဆံတာကိုပြောတာနော် အမြင်မတူသူများပြောထားတဲ့ကြားကနေမဖက်ကြပါနဲ့ အလုပ်​ကိစ္စများကိုမစဉ်းစားဘဲ ​အေး​အေးလူလူအနားယူ​နေ​သော ဦး​​ဇော်​မင်းတ​ယောက်​ အခုမှပင်​စိတ်​​ရောလူပါ လန်းဆန်း​နေ​​လေသည်​။ အိပ်​ခန်းထဲက​နေဘယ်​မှမသွားဘဲ တရက်​ထဲသာအနားယူ​နေခဲ့ခြင်းဖြစ်​သည်​။ သူ၏အိပ်​ခန်းနံရံက ကွယ်​လွန်​သွားခဲ့ပြီဖြစ်​​သော ဇနီးသည်​​ဒေါ်နှင်း​အေး၏ပုံကိုကြည့်​​နေမိရင်း သူ့ဇနီးသည်​နှင့်​ ရုပ်​ချင်းအလွန်​ပင်​တူ​သော သူ၏အ သက်​ သူ၏ဘဝဟုပင်​တင်​စားထားခဲ့​သော တဦးထဲ​သောသမီး​လေး နှင်းဖြူလွင်​၏မျက်​နှာကိုလည်း မြင်​​ယောင်​လာခဲ့သည်​။ ထို့​ကြောင့်​ သူ့အိပ်​ခန်းထဲက DVD စက်​ကိုဖွင့်​ပြီး သူတ​နေ့တခါပုံမှန်​ကြည့်​​နေကျဖြစ်​​သော အ​ခွေကိုကြည့်​​နေလိုက်​သည်​။ ထိုအ​ခွေမှာ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားတကားမဟုတ်​သလို သီချင်းအ​ခွေလည်းမဟုတ်​​ပေ။ ထိုအ​ခွေမှာ အမျိုးသမီးငယ်​တ​ယောက်​ လွတ်​လပ်​စွာ​ရေကူး​နေတာကို ရိုက်​ထား​သောအ​ခွေဘဲဖြစ်​ပြီးထိုအမျိုးသမီးငယ်​​လေးမှာ သူ၏သမီးနှင်းဖြူလွင်​ပင်​ ဖြစ်​သည်​။ ကျိကျိတက်​ချမ်းသာ​နေ​သော ဦး​ဇော်​မင်းရဲ့အသက်​မှာ ၄၀ ​ကျော်​ခါစသာရှိ​သေးပြီး အသားဖြူဖြူ အရပ်​မြင့်​မြင့်​ဖြင့်​ ကြည့်​လို့​ကောင်းပြီး ​ယောင်္ကျားပီသ​သောလူတ​ယောက်​လည်းဖြစ်​သည်​။ဦး​ဇော်​မင်းမှာ ရုပ်​ရှိပြီး​ရေကလည်းအလွန်​လျှံသဖြင့်​အရွယ်​စုံမိန်းမများက လပ်​ထပ်​ရန်​​စောင့်​​နေကြသည်​ဟု မဆိုလို​သော်​လည်း ဦး​ဇော်​မင်းဘက်​ကသာ စတင်​ကမ်းလှမ်းလိုက်​ပါက ငြင်းနိုင်​ကြလိမ့်​မည်​မဟုတ်​​ချေ။ TV ဖန်​သားပြင်​​ပေါ်တွင်​ အသက်​ ၂၃ […]
အင်းစက် အပြာစာအုပ် ချွေးမ
ဖောင်း…..ဖောင်း………..ရှီး…………ဖောင်း သီးတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်တရက်နေ့ညလေးကမိုးတိမ်သားကင်းကင်းနဲ့ကြည်လင်တောက်ပနေတယ်လေ။ ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးငယ်တွေရဲ့ဗျောက်ဖောက်သံကရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးဟိုမှသည်မှ သောသောညံနေတယ်။ “ဖေဖေနားညီးနေပြီထင်တယ်” “မညီးပါဘူးသမီးရယ် ဖေဖေတို့ငယ်ငယ်ကလဲဒီလိုပဲကစားကြတာပါပဲ” ၀ရံတာကနေအိမ်ထဲကိုဝင်လာရင်းဘေးက စတီခုံလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့ချွေးမလေးကို ဦးထွန်းလှမ်းကြည့်ပြောလိုက်မိတယ်။ “အဖေ့သားနဲ့မြေးကတော့ရေကျော်ပွဲဈေးသွားကြပြီ” “သမီးရောလိုက်မသွားဘူးလား” “မလိုက်ချင်ပါဘူးအဖေရယ်လူအရမ်းများတာ သူတို့သားအဖပဲဝါသနာပါတယ်လေ” ပြောပြီးတော့နောက်ဖေးဖက်ထွက်သွားတဲ့ချွေးမလေးကိုဦးထွန်းငေးနေမိတယ် မိန်းမဆုံးပြီးထဲကရွာကအိမ်မှာတစ်ယောက်ထဲနေနေရာကနေသားနဲ့ချွေးမလေးကရန်ကုန်ကိုဘုရားဖူးခေါ်လို့ရောက်လာခဲ့တာပေါ့။ ပြောရအုံးမယ် ကျွန်တော်အသက်ကအခုတန်ဆောင်မုန်းဆို ၄၈ ပြည့်ပြီပေါ့။ ရွာမှာတော့မိန်းမနဲ့ကုန်စုံဆိုင်လေးဖွင့်ရင်းဘ၀ကိုရပ်တည်ခဲ့ကြတာ။ သားဖိုးလုံးကလဲအားကိုးရပါတယ် မိန်းမဆုံးတော့ဘာမှမလုပ်တော့နဲ့ ဆိုပြီးသူပဲထောက်ပံ့ထားတာလေ။ ဒီကောင့်ကိုရန်ကုန်မှာကျောင်းထားဖို့ရွာမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ခြို့ခြံချွေတာပြီးတော့နေခဲ့ရတာ။ကျောင်းပြီးတော့အလုပ်ဝင်ရင်းနဲ့ အလုပ်ရှင်ရဲ့သမီးနဲ့ညားတော့တာပါပဲဗျာခုတော့ဒီကောင်သိတတ်လို့သာပေါ့။အိုဇာတာကောင်းတယ်ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်။ ခုတော့ဘာအလုပ်မှမလုပ်ပဲဘုရားသွားကျောင်းတက်ပေါ့။ခုလဲအဖေရန်ကုန်လာနေဆိုတာနဲ့တစ်လနှစ်လရောက်လာခဲ့တာ တောသားဆိုတေ့ာလဲကိုယ့်ရွာပဲကိုယ်ပျော်တယ်လေ။ခင်ရာဆွေမျိုးမြိန်ရာဟင်းကောင်းဆိုသလိုပေါ့ရွာမှာကကိုယ့်ဆွေကိုယ့်မျိုးလိုဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့ ဒီကောင်တွေရန်ကုန်တော့တယ်မကြိုက်လှပါဘူးဗျာ ၂၅ပေ ပေ၅၀ အိမ်ခန်းထဲမှာအိမ်ခန်းကသုံးခန်းနောက်ဖေးရေချိုးခန်းအိမ်သာဆိုပေမဲ့ တယ်ပြီးကျဉ်းကျပ်လှတယ်။ပြီးတော့လဲ အဲယားကွန်းဆိုတဲ့ဟာကလဲအေးပြီးလတ်ဆတ်နေတဲ့လေနဲ့ဇိမ်တော့ကျပါရဲ့ ကျုပ်တော့ရွာ က လေလောက်မကြိုက်လှဘူးရယ်။ ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ရောက်မှပဲကျုပ်စိတ်လဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိပါဘူး။ရွာမှာတော့အားလုံးကရိုးရိုးရယ်လေ။ ဒီကမိန်းခလေးတွေကစကတ်ကျပ်ကျပ်ထုပ်ထုပ်နဲ့တစ်ချို့ဆိုအတွင်းကဘောင်းဘီအရာလေးတောင်ထင်းလို့ ဒါနဲ့ပြောရအုံးမယ် ကျုပ်ချွေးမလေးနာမည်က အိဖြူကျော်တဲ့ဗျ တရုတ်မြန်မာ ကပြားမလေးပေါ့။ဖိုးလုံးကျောင်းပြီးတော့ကောင်မလေး မိဘရဲ့ပလပ်စတစ်ဆိုင်မှာဝင်လုပ်ရင်းနဲ့ရိုးသားကြိုးစားတယ်ဆိုပြီးသူတို့သမီးနဲ့ပေးစားလိုက်တော့တာပါပဲ။ ဒီကောင်ကတောသားသာဆိုတာလူပုံကရည်ရည်မွန်မွန်ကို..။ ကျုပ်ချွေးမလေးကလဲမြို့သူဆိုတော့ဝတ်တတ်စားတတ်ရယ်လေ။ခုတော့သူတို့သား ကျုပ်မြေးတောင် ၅နှစ်ထဲဝင်လို့ကျောင်းတက်နေပြီ ဖိုးလုံးအသက်က ၂၈ အိဖြူလေးကတော့၃၂ ထဲတောင်ဝင်ပြီထင်တယ်။တစ်သားမွေးတော့တသွေးလှဆိုသလိုပဲ အသားကဖြူဖြူတုတ်တုတ်ပြည့်ပြည့်နဲ့ […]
Posted on October 30, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)
Posted on October 28, 2019 Author alanlaymyar	Comment(0)